Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Esophagus Conditions အစာမြိုပြွန်ရောဂါများ
Esophagus Conditions အစာမြိုပြွန်ရောဂါများ
(၁) ဆရာဝန်က ကျွန်မပြတဲ့အချိန်မှာ အစာလမ်းရော အသက် ရှူလမ်းရော ၂ မျိုးစလုံးဖြစ်နေတယ် ပြောပါတယ်။ အသံက ဆေးခန်းမပြခင် ကစကားပြောရင် အားမရဘူး အသံလည်းမထွက်ဘူး။ ခုတော့ ကောင်းသွားပါပြီ။ ချွဲနဲနဲထွက်နေပြီး အစာစားရင် နည်းနည်းနင်နေတယ်။ အရမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန်က လည်မျိုကျဉ်းတာ အစာအိမ်ကြောင့်ဆိုပြီး air-x နဲ့ mosac-5 ပေးပါတယ်။ အရင်ကအတိုင်းဘဲနင်တာ ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ အမဲသားဆို ဝါးပြီးမျိုမချရဲဘူး။ နင်မှာစိုးလို့၊ နည်းနည်းလေးဝါးရင် တော့ရတယ်။ ဓါတ်မှန်ကို ဆေးဖြူရေ တွေမျိုပြီးရိုက်ခိုင်းတာ ရေတွေကတန်းမကျဘဲ လည်ချောင်းအလယ်မှာ အလုံးလိုဖြစ်နေတာ ဓါတ်မှန်ထဲမှာပေါ်တယ်။ ပြည်မှာနေတာဆိုတော့ ရန်ကုန်သွားပြရမလား အကြံပေးပါဆရာ။
(၂) အရင်လက ထမင်းစားရင် နင်လို့ စာရေးခဲ့တဲ့သူပါ။ ကျနော် အခုပိုနင်လာလို့ မှန်ပြောင်းကြည့်ရတာ အစာအိမ်အထက်နား ရင်အုံအောက်က လည်ချောင်းမှာ တော်တော်လေးကျဉ်းနေပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲကြည့်ပြီးတာ။ အဲဒီက အသားစကိုလည်း ယူထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေက နောက် ၂ လမှသိရမယ်တဲ့။ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မဟုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ အဖြေထွက်လို့ ချဲ့လို့ရရင်ရ၊ မရရင်ခွဲရမယ်တဲ့ဆရာ။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုရောဂါမျိုးတွေ ဖြစ်တက်လည်း။ ဖြစ်တဲ့လူတွေရော ရှိလား သိချင်တာပါ၊ ရှိရင်ရော ဘယ်လိုကုသလို့ ရနိုင်ပါသလဲဆရာ။
Esophagus အစာမြိုပြွန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ
1. Heartburn အစာမြိုပြွန်အဆုံး အစာအိမ်အရောက်မှာ ကွင်းလိုကြွက်သားအထိန်း ရှိတယ်။ အစာအိမ်ထဲ ရောက်ပြီးသား အစာနဲ့ရေကို အထက်ပြန်မဆန်အောင်ထိန်ပေးတယ်။ ဒါက အပြည့်အဝအလုပ်မလုပ်နိုင်ရင် အစာအိမ်ထဲက ရှိတာတွေ အထက်ဆန်လာမယ်။ အစာခြေအရည် (အက်စစ်) လဲပါနေလို့ ပူစပ်ပူလောင်နေမယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ အနေရခက်မယ်။
2. Gastroesophageal reflux disease (GERD) အစာအိမ်ထဲကဟာတွေအထက်ဆန်နေတာ ခဏခဏ ဖြစ်နေတာကို ခေါ်တယ်။
3. Esophagitis အစာမြိုပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အစာအိမ်ထဲကအစာတွေအထက်ဆန်ု့ဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဒီရောဂါ ရနိုင်တယ်။
4. Barrett's esophagus အစာအိမ်ထဲမှာရှိတာတွေ ခဏခဏဆန်တက်ရာကနေ အစာမြိုပြွန်ရဲ့ တည်ဆောက်မှု အနေအထာ ပြောင်းလာတယ်။ ဒီကနေတဆင့် ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။
5. Esophageal ulcer အစာမြိုပြွန်အနာ၊ အစာအိမ်ထဲမှာရှိတာတွေ ဆန်တက်တာ နာတာရှည်ဖြစ်ရာကနေ အစာမြိုပြွန်နံရံမှာ အနာဖြစ်လာတယ်။
6. Esophageal stricture အစာမြိုပြွန်ကျဉ်းနေတာ၊ အစာအိမ်ထဲမှာရှိတာတွေ ခဏခဏဆန်တက်ရာကနေ ဖြစ်တယ်။
7. Achalasia ရှားတယ်။ အစာမြိုပြွန်အဆုံး အစာအိမ်အရောက်မှာ ကွင်းလိုကြွက်သားအထိန်း အလုပ်မလုပ်တာ။ အမြိုရလဲခက်မယ်။ အထက်လနတ်တာလဲဖြစ်မယ်။
8. Esophageal cancer အစာမြိုပြွန် ကင်ဆာ၊ ဆိုးတယ်။ ကာဘို့ဖြစ်လဲ မပြောနိုင်ဘူး။
9. Mallory-Weiss tear အန်ရာကနေဖြစ်တယ်။ အစာမြိုပြီန်စုတ်ပြဲမယ်။ သွေးယိုမယ်။ အန်တာထဲ သွေးပါမယ်။
10. Esophageal varices သွေးကြောထုံးခြင်း၊ အသဲခြောက်နေသူတွေမှာဖြစ်တယ်။ သွေးယိုမယ်။ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်တယ်။
11. Esophageal ring အစာမြိုပြွန် အောက်ပိုင်းမှာ ကွင်းဖြစ်ခြင်း၊ အဖြစ်မနည်းဘူး။ ကင်ဆာမဟုတ်ဘူး။ တချို့မှာ မခံစားရဘူး။ တချို့မှာ အမြိုရခက်မယ်။
12. Esophageal web အစာမြိုပြွန် အထက်ပိုင်းမှာ ကွင်းဖြစ်ခြင်း၊ အဖြစ်မနည်းဘူး။ ကင်ဆာမဟုတ်ဘူး။ ဘာမှ မခံစားရဘူး။
13. Plummer-Vinson syndrome (နာတာရှည် သံဓါတ်နည်းသွေးအားနည်းတာ + အစာမြိုပြွန် အထက်ပိုင်းမှာ ကွင်းဖြစ်ခြင်း၊)
Esophageal ring ကွင်းဖြစ်နေခြင်း
အစာမြိုပြွန်အင်္ဂါပိုင်း ထိခိုက်တဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးပါ။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရော ကုသမှုမှာပါ တိတိကျကျတော့ မရှိသေးပါ။ ကျဉ်းနေပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားရသူကများပြီး ခံစားရရင် အစာမြိုရခက်လာမယ်။ ကွင်းဆိုတာက အစာမြိုပြွန်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းမှာမဆို ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အများအားဖြင့် အောက်ဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။
အမေရိကားမှာ လူ ၂ သောင်းခွဲကနေ ၅ သောင်းမှာ တယောက်ရှိနိုင်တယ်။ မခံစားလဲရှိနေတာကို မသိနိုင်လို့ ဒီကိန်းဂဏန်းက မသေခြာလှဘူး။
Dysphagia အစာမြိုခက်ခဲလာတာမှာ အစမှာ အစာမာကိုမမြိုနိုင်ဘူး။ လူကပိန်လာမယ်။ သွေးအားနည်းလာမယ်။ Achalasia, Nutcracker esophagus, Diffuse esophageal spasm ဆိုတာတွေနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ အသက် ၅ဝ ကျော်သူတွေဆိုရင် Schatzki ring ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရင်ညွန့်ရိုးအောက်နာကခံစားရတာဆိုရင် အစာမြန်ုပြွန် အလည်အောက်နားကဖြစ်မယ်။ ရင်ညွန့်ရိုးထိပ်နေရာကဆိုရင် ပြောဘို့မသေခြာဘူး။ Lower esophageal rings အောက်ပိုင်းမှာကျဉ်းတာ (ကွင်းဖြစ်တာ) ဆိုရင် GERD အစာခြေရည် အထက်ဆန်ရောဂါနဲ့ တွဲနေတတ်တယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်သူတွေမှာ ခံစားတာရှိလာမယ်။ Upper esophageal webs အထက်ပိုင်းကျဉ် (ပင့်ကူအိမ်ဖြစ်တာ) ဆိုနိုင်တယ်။
Laboratory Studies ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်သင့်တယ်။ CBC count, Iron panel, Ferritin, Antigliadin antibodies, Antiendomysial antibodies, Imaging Studies, Barium swallow, Upper endoscopy တွေဖြစ်တယ်။
Medical Care ဆေးဝါးကုသမှု
• ဆေးမသောက်မီ လူနာကို ဆေးရဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေသာမက ဆေးကို သေးသေးလေးတွေလုပ်ပြီး သောက်ပေမဲ့ ကျဉ်းတဲ့နေရာမှာ သွားတစ်နေနိုင်တဲ့အချက်ကိုပါ သိစေသင့်တယ်။ ရေ ၈ အောင်စ သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး နာရီဝက်အတွင်း လဲလျှောင်းတာမလုပ်သင့်ပါ။
• Eosinophilic esophagitis ရောဂါက အထက်ပိုင်းဖြစ်နေပြီး ကွင်းလဲဖြစ်နေရင် Fluticasone propionate 220 µg/puff တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတာ သက်သာတယ်။
• Esophageal dilation with mechanical bougie ချဲ့ပေးတာလုပ်နိုင်တယ်။
• ချဲ့ကရိယာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Savary dilator နဲ့ Maloney (mercury filled) dilator တွေဖြစ်တယ်။
• Surgical Care ခွဲစိတ်ဘို့လိုတာ ရှားတယ်။
• Diet အစာအာဟာရ = အစာပျော့သားပါ၊ အသီးအရွက်စာဒပါ။ အသားနည်းနည်းသာစားပါ။ ဖြေဖြေသာစားပါ။ သေသေခြာခြာ ဝါးစားပါ။
• ကွင်း၊ ပင့်ကူအိမ် နဲ့ GERD ရောဖြစ်နေတာဆိုရင် Antireflux ဆေးပေးတယ်။
• Iron သံဓါတ်ဆေးပေးရမယ်။
• Proton pump inhibitors = Omeprazole (Prilosec), Lansoprazole (Prevacid) ဆေးမျိုးက အစာခြေရည်ထွက်တာ နည်းစေမယ်။